/blog/gallery/Raw Proviron (Mesterolone) na bodybuilding, usoro, na okirikiri
Ihe na 01 / 25 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Kedu Is Raw Proviron (Mesterolone)?
Raz mesterolone bụ crystalline ntụ ntụ, nke na-acha ọcha na-acha odo odo ma ọ bụghị igbari na mmiri. A maara ya site na aha ya, Proviron. Ihe obula mbadamba gburugburu / mpi nwere gburugburu 25mg raw mesterolone ntụ ntụ.Anweghị ka ndị ọzọ steroid, raw Mesterolone feature very weak or even zero anabolic activity. N'ihi nke a, a naghị ezo aka na ya anabolic steroid. A na-eji ya ekwu okwu n 'nza si otú a na-ejighị ọgwụgwọ metterolone.
Schering mepụtara Mesterolone na 1934. A na-edepụta ya n'etiti ndị steroid kachasị ochie na Methyltestosterone na Testosterone Propionate nke mepụtara ma jiri ya na ọgwụ na 1935 na 1937 n'otu n'otu. Testosterone propionate na Methyltestosterone bụ ndị a maara karịa n'ihi ọrụ ike ha. E weere Proviron dị ka steroid na-esighi ike otú ahụ ka ọ na-ewu ewu ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndị ọzọ steroid abụọ.
Dị ka Mesterolone (Proviron) a na-ewere ọgwụ ọjọọ oge ochie, atụmatụ ndị dị mma ka na-apụta ruo oge. Ọ bụ ọgwụ dị irè banyere ndidi n'etiti ndị ọrụ na nchekwa. Na mpaghara ahụike, Mesterolone (1424-00-6) eji eme ihe banyere mmetuta nke ndi nwoke meworo agadi ndi na - ata ura, enweghi ike na infertility na ala na - eto eto. Ọ bụ otu n'ime ụbụrụ anabolic kachasị mma.
Na nkà mmụta ọgwụ, a na-eji mesterolone (Proviron) mee ihe iji dozie infertility. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ androgenic ma ọ bụ anabolic steroid na-ebelata gonadotropins na-akpata obere oge ọmụmụ, Proviron, mgbe ejiri ya mee ihe na-adịghị emetụta ọkwa LH n'ime ahụ. Otú ọ dị, ọ dị mma ma ọ bụghị na Proviron adịghị ebuli LH ọkwa dịka ụfọdụ ndị na-ekwenye. Dị ka nyocha, Mesterolone na-akwado spermatogenesis na testes site n'inye etrogenic mmetụta dị mkpa maka usoro a.
Onye na-ebute ihe na-eme ihe dị iche iche dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ma na-enye ụfọdụ àgwà ya na Winstrol, Masteron na Anavar. Ịrụ ọrụ nke maara ihe, Mesterolone ejighị ya iji mee ka mwepụ nke muscle uka kwalite. Otú ọ dị, ọ na-arụ ọrụ dị oké mkpa mgbe ọ na-emegharị oge. Ejiji ya dị mkpa karia ịkọ usoro, ọ bụ ezie na ọrụ ya dịkwa iche na nke a.
Schering na-arụzi Mesterolone ugbu a n'okpuru aha aha, Proviron, n'ụwa nile. A na-ere ya site na iji aha dị iche iche, Dịka ọmụmaatụ, Asche na Jenepharm na Germany na-ere ya n'okpuru Pluriviron na Vistimon. Brown na Burke na India na-ere ya n'aha aha Weghachite. N'ụzọ dị mwute, a dịghị anakwere Proviron dị ka ọgwụ ọgwụ na US
Raw Proviron (Mesterolone) Njirimara Na Na
Mesterolone bụ ihe mgbapụta Dihydrotestosterone gbanwere site na nsonye nke methyl, 1-methyl-dihydrotestosterone, na 1st carbon. N'ihi nke a, ọ bụrụ na ọgwụ a anaghị emerụ ọrịa ahụ, ọ nwere ike iji ọnụ kwuo ya. N'etiti ụbụrụ anabolic oral, Proviron bụ otu n'ime mmadụ ole na ole na-enweghị C17-alpha alkylated ma kama na-eburu otu methyl. Oral Primobolan dara n'otu ụdị dị ka Proviron banyere ìgwè methyl. C17-aa oral steroid nwere elu bioavailability karịa Proviron. Nke a emetụtawo ewu ewu Proviron n'etiti arụmọrụ nke na-eme ka ozubuilders ghara ịdị njọ.
N'iji ya tụnyere testosterone, Mesterolone na-eburu ọnụ ọgụgụ anabolic na androgenic nke 100-150 na 30-40 n'otu n'otu. Ụdị Testosterone na 100 na ụdị ọ bụla. Ọbụna na ọkwa dị elu nke anabolic, Mesterolone na-egosiputa ntakịrị anabolic eme karịa testosterone. Otu ihe ahụ na-aga Halotestin bụ nke a maara maka nnukwu anabolic rating ma ọ bụ ọrụ anabolic. Ebumnuche Prorogen na androgenic na Proviron na-ebelata arụmọrụ na-arụ ọrụ androgenic.
Dị ka anyị tụlere n'elu, ọgwụ a na - egosiputa ụdị ọrụ anabolic dị ntakịrị nke a na - akpọkarị steroid androgenic. Dịka DHT, ihe nne na nna ya, Proviron gbajiri agbaji ma metabolised n'ime ndị metabolites na-adịghị arụ ọrụ ngwa ngwa ngwa ahụ anụ ahụ na-etinye ya. Nke a bụ isi ihe kpatara ya ji eme ihe na-adịghị ike.
Enzyme 3-hydroxysteroid dehydrogenase, nke a na-etinye uche na ngwongwo muscle, jikọta ya na dihydrotestosterone wee mee ka ọ ghọọ ngwakọta na mmetụta efu nke anabolic. N'ihi ya, Proviron na-aghọ onye na-adịghị ike anabolic steroid. Nrịta n'etiti ndị na-ahụ maka ụbụrụ na-enwe ya na ndị na-anabata ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka ọrụ anabolic ghara ịdị ike. Nkà mmụta sayensị, nke a abụghị ikpe.
Mesterolone nwere njedebe dị mma maka mmekọahụ Hormone Binding Globulin (SHBG), protein nke na-ejikọta onwe ya na steroid, dị ka testosterone, na-eme ka ha ghara ịrụ ọrụ. Mgbe a na-ejikọ Proviron na ndị ọzọ anabolic steroid, ọ na-eme ka mmetụta na ihe omume nke steroid anabolic site na usoro a. N'ikpeazụ, ọtụtụ testosterone nwere onwe ya iji rụọ ọrụ ya n'ime ahụ.
Proviron nwere ike iji enzyme ahụ na-agbanwe testosterone si estrogen, nke a makwaara dị ka enzyme aromatase. Onye steroid a na - egbochi ọrụ aromatas site na ijide onwe ya na enzyme aromatase ma gbochie mmetụta nke estrogenic. Mmetụta nke estrogenic ya nwere ike ọ gaghị adị ike dịka nke Onye Mmegide Aromatase, mana mmetụta dị ịrịba ama. Ụdị a na-adabere na ụdị usoro ihe a na-eme.
Raw Proviron (Mesterolone) bara uru na bodybuilding (Gini ka Proviron do?)
Mgbanwe uru nke na-eme ka mmiri ghara ịba
Proviron abụghị isi steroid nke bodybuilders na-eme n'oge usoro mmechi. Ụfọdụ agaghị eji ya ma ọ bụrụ na ị gafee. Otú ọ dị, gụnyere Proviron na nchịkọta, na-enyere aka ịmepụta ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe dị egwu na-emetụta akụkụ ahụ. Ọganihu nwere ike ịmalite ịda mbà na mgbe ụfọdụ, ọ na-akwụsị n'oge ụfọdụ n'oge ndụ nke ọtụtụ mmadụ. Proviron ga-aba uru dị ukwuu n'oge a ebe ọ na-eme ka nnwere onwe nke ndị ọzọ steroid gbakwunyere n'ime mgbakọ ahụ na-eme ka ọrụ ha dị elu.
Ndị na-arụ ọrụ na-eme ihe ike na-eji nnukwu dosages nke testosterone n'oge mgbapụ, ma na-emekarị, ụbụrụ ahụ dị ala n'oge nke a ma e jiri ya tụnyere oge okirikiri. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọkachamara na-ahọrọ iwepụta ọtụtụ testosterone mgbe oge okirikiri maka ụfọdụ ihe kpatara ya. Mesterolone na-abanye aka na ikpe dị otú ahụ ebe ọ na-enye mmelite a na-achọ na androgen. Enwere ike iwere nke a dị ka ihe na-enweghị isi, ma ọ bara ezigbo uru.
Oge ịcha ihe ga-abara gị uru
Razu Mesterolone kachasị mma, site na bodybuilders, n'oge mgbapụ ọnwụ. N'oge a, ọ na-egosiputa mmekpa ahụ yiri nke Masteron. Ọ bụ ezie na, uru ya kachasị dị mkpa bụ ike ịme ka nrụrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke nrụgide ndị ọzọ gụnyere na nchịkọta. Proviron na-ejikọta ngwa ngwa na androgen nke na-enyere onye ọrụ aka ịkụ anụ abụba ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. N'iburu n'uche mmetụta nke estrogenic megide Proviron, ndị ọrụ ga-enwe ntaramahụhụ mmiri, ma eleghị anya, ọ gaghị adị mkpa ịgụnye estrogen na omenala. Ọzọkwa, Proviron na-amụba ọnụ ọgụgụ nke testosterone n'efu. Nke a bụ nke enyemaka dị ukwuu ebe ọ bụ na ọkwa nke testosterone dịkarị ala n'oge oge a nke anabolic steroid. Nsonaazụ ga-adị elu karịa ndị mmadụ na-agụnye Proviron mgbe ị na-eji obere ọgwụ testosterone tụnyere ndị ọrụ na-adịghị. N'okwu dị mkpirikpi, uru dị ukwuu nke mesterolone n'oge a na-ebibi ihe bụ ikike ya iji meziwanye androgenicity nke ndị ọzọ steroid gụnyere na nchịkọta na iji mekpa ahụ ahụ. Mmetụta nke Proviron dosage enwere ike ịma ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ adabere.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, Mesterolone (Proviron) bụ ihe omimi nke DHT. Nke a pụtara na iji ya emeghị ihe ọ bụla nke estrogenic. N'iji ya tụnyere ọgwụ ndị na-eme ka ọgwụ estrogen ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, Nolvadex, Proviron ọ bụ ezie na ọ bụghị nke siri ike, bụ onye na-emepụta estrogens dị irè karị. Iji mee ka o doo anya, Proviron na-egbochi mmepụta nke estrogen mgbe ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi estrogen n'ime ahụ. Ndị na-arụ ọrụ na-eme ihe na-eme ka ha na-eme ihe na-eme ka ha na-ebute Proviron na ndị ọzọ steroid. A na-enwe mmetụta ndị na-akpata Estrogenic kpatara ndị ọzọ na steroid site Proviron mgbe e tinyere na nchịkọta. N'ihi njirimara nke etiti estrogen, a na-eji Proviron ugbu a na ngalaba ahụike iji agwọ ọrịa kansa na gynecomastia.
Proviron steroid, dị ka ndị ọzọ DHT ihe mgbaru ọsọ, na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'anu ahụ. Ọ na-akwalite nkwụsị nke abụba abụba echekwara n'ime ahụ n'ime ike eji eme ihe kwa ụbọchị. Na nloghachi, ọkpụkpụ lipid na ahụ na-ebelata. Mbelata nke ogo egbugbere ọnụ na-ebute site na ụba etrogen etoju nke Proviron use. Nke a bụ ihe mere Mesterolone ji arụ ọrụ nke oma n'oge oge mmebi.
Ịṅụ ọgwụ nje nwere ike ịsọ oyi karịsịa ma ọ bụrụ na ndị ọrụ nwere mmeri aromatisation na mmetụta ndị na-eso. Nke a bụ usoro nke testosterone n'ime ahụ ma ọ bụ nke a na-elekọta site na steroid dị na estrogen. Ihe ndị na-esote gụnyere njigide mmiri, uru dị arọ, gynecomastia, mmụgharị hormonal n'etiti ndị ọzọ. Estrogen na-akwalite mmepụta nke hormone anti-anabolic stress, nke a maara dika cortisol.
Ozi ọma ahụ bụ na Proviron adịghị mma. Ọ na-egbochi usoro ize ndụ a site na ijide onwe ya na enzyme nke na-akwalite aromatisation. Ya mere, Proviron egbochi mmemme estrogenic ma nye ya nchedo mmetụta mmetụta ndị ọrụ ndị a kpatara.
Mee ka ọrụ steroid ndị ọzọ dịkwuo mma
Iji nweta nsonaazụ kachasị, bodybuilders stack anabolic androgenic steroid with Proviron steroid. Akpa, dị ka e kwuru na mbụ, ọ na-egbochi mmetụta mmetụta nke estrogenic. Nke abuo, Proviron na-ekere òkè dị ka ihe ndị ọzọ na-eme steroid na-eme ka ha dịkwuo irè. O nwere ike ime nke a ebe ọ bụ na ọ na-ejikọta onwe ya na ndị na-anabata etrogen na usoro ahụ. N'ikpeazụ, ndị steroid niile agbakwunyere na nchịkọta ahụ na-arụ ọrụ karị. Dịka ọmụmaatụ mgbe ejiri ya na Anavar ma ọ bụ Androlic steroid.
Na-ebelata hormone mmekọahụ ejikọta globulin (SHBG)
Mmekọahụ nke na-ejide globulin na-ejikọta testosterone dị na ahụ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke testosterone free. Proviron nwere njikọ dị elu nke njikọta na hormone a, ya mere, belata ya, na - akpata ọnụ ọgụgụ dị elu nke testosterone n'efu. Mkpesa nke na-enye aka na-akwalite ahụ ike na-ewuli elu mgbe ị na-atụ egwu ma na-egbutu oge. Ndị na-agụnye Proviron na ngwugwu ha ga-enwe obi ụtọ na nsonaazụ kacha mma.
Na-agbazi ụmụ nwoke ọmụmụ
Mesterolone 1424-00-6 bụ ọgwụ kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwoke na-amụbaghị ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-akpata nsogbu a site n'adịghị mpempe akwụkwọ mmepụta ihe. Ọ bụ ezie na nkọwa gbasara ụmụ nwoke na ọmụmụ na-adịghị edozi anya, a kwenyere na mmepụta spam na-adabere na gonadotrophins na androgens, dịka ọmụmaatụ, testosterone. Mmiri homonụ ndị a bụ ihe na-akpali akpali agụụ mmekọahụ. N'iru aka, Proviron na-akpali etrogens ma ọ dịghị emetụta gonadotrophins. Nke a na-eme ka afọ ojuju Proviron na-enye aka ịmụba ọmụmụ.
Zuru okè maka asọmpi nkwadebe
Proviron bụ enyi zuru okè mgbe ị kwadebere maka asọmpi. Ọ na-enye aka n'ịnọgide na-enwe ike, meziwanye ahụ ike na ịchekwa ahụ ike n'oge ọ bụla ịkwado asọmpi. Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ụbụrụ ejiriwo Proviron maka ịkụcha na ịghasị ebe ọ na-eme ka nrụpụta nke androgen na-arị elu ma na-ebelata etiti estrogen. N'ikpeazụ, ndị ọrụ na-enweta afọ ojuju na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-emepụta ihe dị ka ike nrụpụta kachasị elu na ihe na-ere ọkụ mgbe eburu mmiri.
Na-emeso adịghị ike
Dika ekwuru na mbu, Proviron enhances testosterone. Na nloghachi, testosterone na-ebelata ihe mgbaàmà nke adịghị ike, nke a makwaara dị ka, adịghị arụ ọrụ erectile. Ọ na-atụkwa anya n'ịgbanye libido; nke a bụ ihe zuru ezu maka ihe ọ bụla na-arụ ọrụ itinye ya na nchịkọta.
Enweghị ọgwụgwọ metterolone
Echiche nke iji agịga na akpụkpọ ahụ nwere ike ịkụda bodybuilders site na iji steroid. N'ụzọ dị nro, a na-eji ọnụ ekwu okwu Proviron, dịka otu ụzọ ị ga - esi were ihe mgbu. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị nke na-asọ mgbu, mgbe ahụ Proviron kwesịrị ịhọrọ ịghara ichefu ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ nke ọ bụla.
Otu n'ime nyocha ahụike emere na mesterolone gosiri na steroid a nwere ike ime ka ọnọdụ ụfọdụ nke ndị ọrụ ụfọdụ na-ata ahụhụ site na ịda mbà n'obi. Nke a adọtara mmasị n'etiti ndị na-arịa ọrịa a. Ndi sayensi, nchoputa nke ule abughi ihe omuma ebe enwere ihe omuma di otua na mpaghara nke ichota ebe. Ihe ndị e ji eme ihe na-emetụta mmetụta dị elu na androgenic nke a nwere ike ime ka ụbụrụ na-adịghị mma na nwoke na nwanyị. N'aka nke ya, Proviron na-eme ka obi dịkwuo mma, inwe obi ike ma na-eme ka obi dị mma ma dị mma na onye na-arụ ọrụ.
Raw Proviron (Mesterolone) Ụdị
Mesterolone, nke kacha mma anabolic steroid, na-eji ụzọ abụọ dị iche iche; maka ebumnuche ahụike iji mesoo ụfọdụ ọrịa na maka ahụike. Enweta uru dị iche iche ma enwere ike ịṅụrịrị ya mgbe a na-edozi ihe ndị dị mma. A ga-atụle usoro a ga-atụle n'okpuru ebe a.
A ga - ewere otu mbadamba 25mg otu ụbọchị ugboro atọ iji mesoo ihe ike ma belata ọnọdụ nwoke na nwanyị. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu kwesịrị ịbụ 75mg kwa ụbọchị. A na-enye usoro ọgwụgwọ a n'oge mbụ nke ọgwụgwọ. Usoro onu ogugu a na-ebelata mbadamba mbadamba 25 otu ugboro kwa ubochi. A na-ejikwa usoro ọgwụ na-eme ihe yiri nke ahụ iji mee ka ụmụ nwoke ghara ịmụ nwa. A na-eji ọgwụ ndị ọzọ eme ihe na Proviron iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Mmezi nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke 50mg na 150mg kwa ụbọchị. Dị ka nchọpụta si kwuo, ihe ndị dị ndụ na-adị adị n'etiti 12 na 13 awa. Nzube bụ isi nke usoro onu ogwu a bụ iji belata nkwụsị nke njigide mmiri, nke estrogen na-emekarị. Nakwa, usoro a na-eme ka o doo anya na ọkwa nke testosterone na usoro ahụ dị ka achọrọ iji gbochie ohere ọ bụla nke ọmụmụ ọmụmụ mgbe oge ahụ gasịrị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmadụ ga-eji 100mg kwa ụbọchị dị ka usoro kachasị dị ala. Otú ọ dị, ma 150mg na 100mg kwa ụbọchị ga-aba nnọọ uru na okwu nhata. Usoro nchịkwa nke usoro ihe dị adị bụ izu asatọ na iri na abụọ. Iji merie ihe mgbagwoju anya nke na-emekarị n'ime izu ikpeazụ nke oge ahụ, izu isii Proviron N'ezie ga-arụ anwansi.
Ndị ọrụ na-etinye aka na egwuregwu ndị siri ike na-eji Proviron. Otú ọ dị, ọ na-eji ụmụ nwanyị akwa mbà n'obi. Ọ bụrụ na nwanyị kpebisie ike iji ya mee ihe, otu usoro nke 25mg kwa ụbọchị ga-ezuru iji kwalite nkwupụta ahụ. Nri ahụ ekwesịghị igafe anọ na izu ise ma ọ bụghị onye ọrụ ga-ata ahụhụ ụda mmetụta. Enwere nsogbu na ime ime. Ndị nne na-azụ na ndị nọọsụ kwesịrị ịhapụ ọgwụ a.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na iji Proviron, ịkwado ya na ndị ọzọ steroid ga-eme gị dị mma karịa nsogbu. Ndị Metterolone na-achọkwa Winstrol, Androlic, Primobolan, Anavar na Masteron, bụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma na ọgwụ ọjọọ mgbe ha na-egbu oge. Ọ na-eme ka etrogenicity nke steroid ji mee ihe na nchịkọta iji nye anụ ahụ siri ike. Ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịgụnye ya na ntanetị ọ bụrụ na ọ ga-aba uru nye ha.
Enwere nsogbu gburugburu ebe obibi
Ọ dịghị akụkọ dị ugbu a banyere mmetụta ndị na-akpata nsogbu nke nnukwu nsogbu ọgbụgba nke Proviron steroid kpatara n'oge okirikiri ma ọ bụ mgbe amesterolone na-agba ọsọ PCT. Otú ọ dị, ojiji nke androgens na-akparaghị ókè na-esochi mmetụta dị egwu dịka ọrịa obi, ọrịa ịmalite, mgbakasị uche, gynecomastia, nsogbu imeju, belata nkwụsị glucose, mmebi ahụ, ọrịa nkwụsị, ọrịa hypogonadal na ọbara ọgbụgba. A ghaghị ime nyocha ọhụụ na ndị mmadụ n'otu n'otu iji chọpụta na a ga-eji ọgwụgwọ mgbaàmà mee ihe. Ndị ọrụ kwesịrị inwe ihe ọmụma zuru oke mgbe iji mee Proviron na ajuju ndi a ga-edozi iji zere ondosage.
Raw Proviron (mesterolone) okirikiri
N'iburu n'uche na Proviron abụghị ụbụrụ anabolic, ma ọ bụ kama na ọ nwere njirimara anabolic, a pụghị iji cycled naanị ya. Kama nke ahụ, a na-eji ya na ndị ọzọ anabolic steroid, dịka ọgwụ ọgwụ, iji belata mmetụta estrogenic na ahụ. Na mgbakwunye, a na-etinye ya na nchịkọta maka mmetụta nke estrogen na mmetụta dị mma nke na-eme ka ahụ dị ike. Ịbụ ezigbo androgen bụ ihe mere ndị na-ahụ maka ahụ ji hụ ya n'anya.
Ndị na-ahụ maka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-eji Proviron dị ka ihe ndị na-emepụta ihe na-eme ka 50mg gaa na 100mg kwa ụbọchị. N'oge a, enweghi ihe mgbochi na oge ọ ga - ewe. Proviron PCT nwere ike na-arụ ọrụ maka ụfọdụ bodybuilders. Ha na-eme nke a iji belata usoro estrogen ma melite ọmụmụ. N'ihe dị ka nke a abụghị mkpebi ọjọọ, e nwere ọgwụ ndị ọzọ dị irè karịa mmetụta ndị siri ike nke a pụrụ iji n'oge PCT dị ka Nolvadex. A ghaghị izere gburugburu ebe ọ bụla ma ọ bụrụ na e nwere ihe ize ndụ nke iwepu mmepụta nke testosterone na ahụ.
Usoro ihe omuma n'okpuru a kwesiri inye gi ihe aturu nke ihe aturu anya.
1 na-agba gburugburu Prozu (mesterolone)
izu Proviron Dianabol
1 50mg kwa ụbọchị 40mg kwa ụbọchị
2 50mg kwa ụbọchị 40mg kwa ụbọchị
3 50mg kwa ụbọchị 40mg kwa ụbọchị
4 50mg kwa ụbọchị 40mg kwa ụbọchị
5 50mg kwa ụbọchị 40mg kwa ụbọchị
6 50mg kwa ụbọchị 40mg kwa ụbọchị
7 50mg kwa ụbọchị 40mg kwa ụbọchị
8 Ụbọchị 50mgper 40mg kwa ụbọchị
2 na-agba gburugburu Prozu (mesterolone)
izu Proviron Anavar
1 40mg / ụbọchị 40mg / ụbọchị
2 40mg / ụbọchị 60mg / ụbọchị
3 60mg / ụbọchị 80mg / ụbọchị
4 60mg / ụbọchị 80mg / ụbọchị
5 60mg / ụbọchị 80mg / ụbọchị
Raw Proviron (mesterolone) Mmetụta dị n'akụkụ
Proviron bụ steroid kasị dịrị nchebe ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ anabolic na androgenic steroid. Ndị na-ahụ maka ụbụrụ nwere ike iji steroid a ma nweta uru ya n'enweghị nsogbu ọ bụla a na-apụghị imeri emeri. A pụrụ inwe ahụmahụ ole na ole, mana enwere ike inwe obere ihe. Enweghị atụ aro maka gburugburu ụmụ nwanyị ebe ọ bụ na ọganihu dị elu dị elu mgbe ojiji. A na-atụle mmetụta ndị nwere mmetụta nke mesterolone n'okpuru ebe a.
Ebumnuche metụtara gburugburu ụwa gụnyere;
Akwa ma ọ bụ obere ike
Ịgba ọsọ ọsọ ọsọ
Ịba ụba ara
Mmetụta mmetụta ọjọọ na-adịghị mma;
Ịba ụba prostate
Mmetụta ndị dị na Proviron nwere ike ọbụna njọ karị ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-emetụ ọgwụ mgbochi ma ọ bụ na-enyefe ihe nfe. Iji zere ihe ize ndụ a, ndị ọrụ kwesịrị ịma mgbe ha ga-ewe Proviron na ezi ego.
Is Iwu iwu?
Iwu, iwu na ụkpụrụ gbasara steroid dị iche n'etiti mpaghara na mba. Dị ka mesterolone (Proviron) abụghị, ndị ọkà mmụta sayensị, ụbụrụ anabolic na-emetụta ụbụrụ ya, ọ na-atụle ma debanye aha dị ka steroid nke anabolic na mba ụfọdụ si otú ahụ kwadoro. A na-ahụkarị gburugburu ebe obibi na mba atọ dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ; United States, United Kingdom na Canada.
Na United States, e depụtara Raw mesterolone dị ka ihe nhazi oge 111 n'okpuru Ụkpụrụ Omume Controlled. N'okwu a, ọ bụ iwu akwadoghị inwe ma ọ bụ ọbụna jiri Proviron na mpaghara a. Ịbubata, ịzụta ma ọ bụ ịzụ ahịa steroid nke anabolic, Proviron gụnyere, a na-ewere dịka omempụ.
Na United Kingdom (England), a na-ewere Proviron dịka ọgwụ eji eme ihe nke IV. Enwere ikike na Pro usage maka mkpa onwe onye bụ iwu na mba a. Ọbịbịa nke steroid a abụghịkwa mpụ maka ụmụ amaala UK.
Na Canada, a na-ede Proviron na Ndenye nke IV, dịka na UK. Nke a pụtara naanị na ihe onwunwe na ịzụta nke ụlọ a bụ iwu. A machibidoro Proviron trafficking ma weere ya felony. Ndị na-achụ nta ego a na-enweta Proviron akwụ ụgwọ nke $ 1000 na / ma ọ bụ ọnwa isii maka mkpọrọ maka mpụ mbụ. Ndị na-eme mpụ ndị ọzọ ga-akwụ ụgwọ ruo $ 2000 dị mma na / ma ọ bụ otu afọ mkpọrọ. A na-ekwu iwu ndị a na Usoro Ọgwụ na Mkpụrụ Na-achịkwa Canada (CDSA).
Mesterolone maka ire ere n'Ịntanet
Ụzọ kachasị mfe ma dị ọnụ ala ịzụta proviron bụ site na ịntanetị dị ka ọtụtụ ndị ọrụ. Ịzụta n'aka ndị na-ere ahịa n'ógbè gị ga-eri gị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-ere egwuregwu mgbatị adịghị ebu ọgwụ ma ọ bụ nwee ya na obere ọnụ. Imirikiti ndị na-ahụ maka ịntanetị nwere Proviron ma ọ bụ ụdị ya na nnukwu nha. Ohere ị ga-enweta gafee igwefọnụ dị elu dị elu karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị n'okpuru ala. Otú ọ dị, nke a ekwesịghị ịbụ ikpe ma ọ bụrụ na ị na-eme nlele ndabere na sistere gị. Site na Schering Proviron Schering dị ukwuu n'ahịa, ọ gaghị enwe ihe kpatara ya maka ịzụta ihe dị iche iche.
Ịzụta Proviron online pụrụ iyi ka ọ bụ ụzọ kasị mfe ị ga-esi nweta ọgwụ, mana enwere ihe ize ndụ. Ebe ọ bụ na Proviron bụ ọgwụ nhazi oge III na United States, ịzụta ya na ntanetị ga-emebi iwu. Nke a na - esote ụda dị arọ ma ọ bụ ọbụna mkpọrọ. Ndị ọrụ nwere ike ịzụta ọgwụ a n'ụzọ iwu kwadoro ma ọ bụrụ na ha nwere ndenye ọgwụ. Nke a ghaghị ịnweta ọgwụ ahụ ọgwụgwọ, kwadoro ma mara ya. Mba ụfọdụ nwere iwu ndị yiri ya, ọ bụ ezie na United States na-esiri ike n'iwu. Mba ndị ọzọ nwere ọmịiko ma na-agbasosi mbọ ike ma ọ bụ ịzụta ahia steroid nke anabolic. Dika Proviron bụ onye na-agwọ ọrịa nke anabolic kasị dịrị nchebe, FDA akwadoghị iji ya mee ihe na United States.
Esi zụta Proviron
Proviron adịghị ezu ọtụtụ na ahịa ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-emepụta ọgwụ, steroid ma ọ bụ ogige ndị anabolic. A na-ele ya anya dị ka ụlọ ọrụ dị mkpa nke kwesịrị ịdị ngwa n'ahịa. Ọnụ ọgụgụ kachasị nke mesterolone nke ọma bụ nke Schering pharmaceuticals na-arụpụta. N'ihi ọdịdị na usoro nke Proviron, ọ na-esi ike ịmepụta ụgha. Nke a apụtaghị na ndị ọrụ ekwesịghị ịkpachara anya mgbe ha na-azụ ihe. Ọ bụghị ọ bụla Proviron maka ire ere mgbasa ozi kwesịrị ịtụkwasị obi.
E wezụga ngwaahịa nke ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-emepụta, e nwere ndị na-arụ ọrụ site na labs. A naghị enye ikike, nyochaa ma ọ bụ na-enye ikikere ụlọ ọrụ nyochaa ala ndị a. Na nkenke, ha na-arụ ọrụ n'enweghị iwu. Proviron SARM bụ otu n'ime ogige ndị e mepụtara site na nnukwu ụlọ larịị nke ọtụtụ ndị maara. Obere ụlọ ndị dị n'okpuru ala adịghị emepụta onyinye a ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe nkịtị. Kama nke ahụ, ha na-ahọrọ ịmepụta ndị ọzọ na-ahụ maka steroid na mgbọrọgwụ.
N'ozuzu, Proviron abụghị ọnụ dị oke ọnụ, ma ruo n'ókè ụfọdụ, ọ nwere ike ịdị mfe. Ịzụta n'aka ụlọ ọrụ ọgwụ na-efu ọnụ karịa ịzụ ya site na ndị na-ere ahịa n'okpuru ala. Nke a, Otú ọ dị, ikpe maka ụlọ ntanye nile (UGL) ngwaahịa maka ọgwụ ndị e mepụtara. Dịka ọmụmaatụ, Schering na-ere 25mg Proviron na $ 0.83; Ndị ọzọ ụlọ ọgwụ na-ere ya na $ 0.75. Ụlọ nyocha n'okpuru ụlọ (UGL); n'aka nke ọzọ, ree 25mg Proviron maka $ 0.50.also, ụlọ ntanetị nwere ike mgbe ụfọdụ ịmepụta gburugburu ebe dị iche iche dịka 100mg, 50mg, 25mg ma ọ bụ ọbụna 20mg. Uzo nke ihe ndi kachasi n'ime ala bu ihe ajuju wee jiri ugwo onu ahia bu ihe omuma.
Ịchọta onye kwadoro ịdabere na onye na-ere legit Proviron nwere ike mgbe ụfọdụ ghọọ ọrụ siri ike. Proviron maka ire ere ma ọ bụ mesterolone maka ire ere ka niile internet. Ndị ọrụ ekwesịghị ịzụta ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụrụ na ha emeghị nchọpụta ndabere nke ndị na-ebu sopụta. Otú ọ dị, ịnwere ike ịzụta Proviron online site n'ahịa anyị. Na steroid.com, anyị na-enye ụbụrụ iwu na-akwado iwu na-enweghị ọgwụ ọ bụla. Ọnụahịa anyị bụ ọnụ ma kwekọọ na ngwaahịa ngwaahịa anyị. Ị ga-enwe ahụ iru ala mgbe ị zụrụ Proviron anyị ebe ọ bụ na anyị na-agba ụgwọ azụmahịa na nke iwu. Ndị na-akpọ Mesterolone chọkwara ndị ọzọ anabolic steroid, nke anyị nyere iwu.
Proviron nwere ike ọ gaghị adị ike dị ka ndị ọzọ anabolic steroid, mana abamuru ya bụ nke a na-ahụ anya na ngwụsị nke usoro mgbagharị. Ejirila m ya na oge m na-agbaji na mgbe ị na-akwado maka asọmpi. Ya mere, ihe niile dị mma, ọ dịghị mkpesa. Tupu m achọpụta onye na-arịa steroid, enwere m nsogbu na mpempe testosterone n'ime ahụ m, ọbụnakwa aghaghị iji ọtụtụ dosogenous testosterone. Ugbu a na m tinyere Proviron Bayer na nchịkọta m, naanị m na-eji obere ntụtụ nke testosterone na-agba ume na n'oge ụfọdụ ọ dịghị. M hụrụ eziokwu ahụ n'anya na steroid a na-enyere m aka ịnọgide na-enwe ahụ ike na-ewuli elu n'ime oge mberede. Dị ka ọtụtụ ndị na-ahụ maka ozu na-eleghara mmetụta ya anya, enweghị m ike ịkwụsị itinye ya na nchịkọta m. Onye steroid a dị mma karịa SARM ndị ọzọ m jiri n'oge gara aga. N'ezie, naanị m ga-emeso nnukwu isi ọwụwa ozugbo n'otu oge. Ọnọdụ m na mmetụta nke ọdịmma gị adịwanye mma.
Gịnị ka gburugburu ebe obibi na-eme? Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na proviron (1424-00-6) bụ steroid na-adịghị ike. Eleghị anya n'ihi na ha aghọtaghị hormone ma ọ bụ na ha ejighị ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, ị gaghị ahụ mgbanwe mmegharị ozugbo ị na-agbanye steroid a, ma mmetụta ya dị ngwa ma jide n'aka; karịsịa mgbe ọ na-eme ka usoro ihe ọkụkụ na-eme mkpọtụ. Ọ bụ ihe pụrụ iche ma dị iche iche ebe ọ bụ na ndị ọrụ adịghị enwe mmetụta ndị na-adịghị mma kpatara mgbe ị na-eji ndị ọzọ anabolic steroid. Enweghi ike ịchọta ọgwụ (Proviron) n'emeghị iwu. Ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnweta ya Steroid.com n'akpa uwe ahịa ahịa.
Njirimara nke Proviron
1 alpha-mythyl-17 beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one
Ihe omuma akwukwo sayensi: C2OH3202
Mkpụrụ ụbụrụ na-ebute ihe dị n'ime: 304.4716
Onye na-ere ọgwụ: Schering
Isi ala na-agbaze agba: Ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị
Okara nke ndụ: 12-13 awa
Ụbọchị a tọhapụrụ: 1960
Ntuziaka a na-atụ aro: 25mgs na 200mgs kwa ụbọchị
Oge nchọpụta: izu ise na isii
AJ, SL, & AA, OA (2009). Mesterolone (Proviron) na-ebute ogo obere spam na mbelata nke profaịlụ nke nwoke na nwanyi na nwoke Sprague Dawley. Research Scientists na edemede, 4(4), 320-327.
Mmiri, MA, & Ọdịnaya, U. UK Muscle Bodybuilding Forum.
Casquero, AC, Berti, JA, Teixeira, LLS, & de Oliveira, HCF (2017). Ihe Omume Oge Na-ebelata CETP na Mesterolone Treatment Counteracts Benefits exercises on Plasma Lipoproteins Profaịlụ: Studies in Transgenic Mice. Lipids, 52(12), 981-990.
Oxymetholone na-ekwu: The Ultimate Guide of Oxymetholone (Anadrol)
Tykerb (231277-92-2) - Onye na-egbu eriri ara
Ihe Nlekọta 15 Winstrol kachasị mkpa Ị Kwesịrị Ịmara Tupu Ịzụta Winstrol Online	Raw Isotretinoin (Accutane) maka ihe otutu: Na-emeso ihe otutu na Isotretinoin
Trenavar ntụ (4642-95-9)